Vedu Vedu - Easy Easy Ratidza - Iyo Yakanakisa Dhijitari Signage Software
Tsvaga zvimwe nezve vedu
Vitrine Multimedia - Tailor Yakagadzirwa Dhijitari Display Solutions
Iyi french based software ndeye yakabudirira uye yakakurumbira dijituni yekuratidzira mhinduro inoshandiswa nevakawanda vebhizinesi level vatengi muEurope yose. Muchokwadi, yakakurumbira kwazvo kuti iyo musiki uye muvambi akafuridzirwa - uye nekufungidzira pasi rose iro rakafanana mhinduro raiwanikwa kuzadzisa zvido zvevatengi zvidiki nezvinodiwa zviri nyore. Uku ndiko kubatika kwakaitwa Multi Display.
Iro Rakajeka Rakawanda Kuratidzwa ndiyo kiyi yediki kune mabhizinesi akakura kusvika pakati, kana iwe uri mubhizinesi mutengi uye uine zvimisikidzo zvinodikanwa kana kuda chimwe chinhu chakati wandei, ingave iri hombe yekuratidza dhizaini kana kungoita kumwe kwekutarisira Vitrine Multimedia inogadzira sosi yakagadzirirwa iwe mhinduro.
Shanyira Vitrine Multimedia
Virtual Cockpit - Dhata & Bhizinesi Ruzivo Nyanzvi
Vatengi vazhinji vari kutsvaga mhinduro yedhijitari vari kutsvaga kuvaka madziro ezvigadzirwa senge makamuri ehondo kana mapopoma - kuona uye kutonga bhizinesi ravo kuburikidza nekushandisa huchenjeri hwe data.
Nekubatana neVirtual Cockpit, tinogona kupa kwakawanda kukosha kune vatengi vedu kutsvaga bhizinesi njere, data analytics kana data management services. Misa kutsvaga kwako, Virtual Cockpit iri pano.
Shanyira Virtual Cockpit
Modo Kudzidzisa & Kudzidziswa
Evoke. Shanduka. Simba
Kuita kuti kushambadzira kwako kuratidzike uye kumhanya ndeimwe nhanho mukugadzira bhizinesi rakabudirira, rimwe danho rakakosha kusimudzira vanhu vako. Modo Coaching & Kudzidzisa isangano rinoshanda nevatungamiriri nevatungamiriri kuvandudza hutungamiriri hunobudirira uye kugadzirisa timu simba uye kutaurirana.
Tora mukana weziso raModo kutarisana kana online online coaching nekudzidziswa mabasa ekukudziridza hunyanzvi hwepfungwa muzvikwata zvako uye nekupa vatungamiriri vako nhanho mukupinda kwavo chaiko.
Usakanganwa kushanyira "nezvedu"chikamu.
Unoda zvakakosha zvinopihwa & zvinoderedzwa?
Saina kumusoro kune yedu tsamba uye chengetedza.
Isu tinokutumira iwe apo neapo tsamba dzetsamba uye makadhi ezvinongedzo. Hatife takapamha, kubvarura kana kutengesa ruzivo rwako.